Doorashada Zanzibar oo la baabi'iyay - BBC News Somali
Doorashada Zanzibar oo la baabi'iyay
28 Oktoobar 2015
Image caption Zanzibar ayaa ah jaziirad ka tirsan Tanzania.
Guddoomiyaha guddiga doorashada Zanzibar ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray natiijadii doorashada ee la baabi'iyay. Waxaa uu sheegay in doorashadii Axaddii dhacday aanay ahayn mid xor iyo xaq ah. Iyadoo ay jireen cillado badan oo ku saabsan qaanuunka doorashooyinka ayaa taasi waxay keentay in waxba kama jiraan laga dhigo codbixintii iyo natiijadii ka soo baxday ilaa iyo amar dambe.
Waxaa uu sheegay in dhibaatooyinka dhacay ay ka mid ahaayeen:
Guddiyada doorashada Zanzibar oo aan si wanaagsan isu-garanayniyo inay jireen farqiyo badan oo u dhexeeya guddiyadaas taas oo gaartay inay meelaha qaar isku-dhacaan Guddiyadu waxay ahaayeen kuwa dhinac raacsan.
Meelaha qaar sida goobaha laga codeynayay magaaalda Pemba waxaa cod ka dhiibtay tiro ka badan intii diiwaanka ku jirtay. Codadkii la dhiibtay si wanaagsan uma aanay ilaalin wakiillada iyo saraakiisha doorashada, gaar ahaan magaalada Pemba.
Magaalada Pemba wakiilladii xisbiyada qaarkood dibadda ayaa loo tuuray.